သဉ္ဇာတို့ မတင် ဘယ်သူတင်မှာလဲ ~ YaWai (ပိုင်စိုးသူ)
Postado Tuesday, February 21, 2012 at 2:34 AM
ဤပုံတွေကို ကြည့်ပါ။ မည်သူမျှ အလှရိုက်ပေးထားခြင်း မဟုတ်။ ကိုယ့်ဖာသာ ကိုယ် ရိုက်ထားကြတာပါ။ ဒီပုံတွေ အွန်လိုင်း ပြန့်လာတဲ့ အခါ ဘလော်ဂါတွေ တင်တယ်လို့များ ပြောဦးမလား။ အရင် ဝေမျှပေးတဲ့ ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင်ပဲ အပြစ်တင်လိုက်ပါ။ ကိုယ်ကတောင် သူများကို ဒီလိုပုံတွေ ပေးတာ။ ပြန်တင်တဲ့ ဘလော်ဂါတွေ အပြစ်လား။ ကိုယ့်အပြစ်သာ ကိုယ်ခံလိုက်ကြပါ။ ဒါမှမဟုတ် ရင်သားကြီးတာကိုများ ဂုဏ်ယူချင်လို့ ကြွားချင်လို့ အွန်လိုင်းတင်လိုက်တာလား သဉ္ဖာရယ်။ ပုရိသတွေ အကြိုက်မျိုးဆိုတာကတော့ အသေအချာပဲ။
Tags: ဓာတ်ပုံစကား, အနုပညာ
pt on March 21, 2012 at 4:47 AM
Anonymous on March 23, 2012 at 12:45 PM
Anonymous on March 27, 2012 at 2:58 AM
သဉ္ဖာတို.က အရင်တည်းက ဇယားတွေဆိုပြီး ရုပ်ရှင်လောကမှာ နာမည်ရနေတာပါ ခုလိုပရိတ်သတ်ကို ကြေငြာပြလိုက်တော. ပိုရှင်းသွားတာပေါ.လေ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အရမ်းကြည်.ကောင်းတယ် အောက်ကဟာပါ ဖော်ပြရင်ပေါ.လေ။
IloveMyanmar on April 2, 2012 at 3:31 AM
ဆီလီကွန်မမတွေဗျို့၊ ၅နှစ်သက်တမ်းဘဲရှိတယ်။ စပွန်ဆာမကောင်းတော့ရင် ပျားချပ်ချပ်တွေ ပြန်ဖြစ်သွားကြမှာပါဗျို့၊
Anonymous on April 3, 2012 at 12:53 PM
ပြီးရင်သူတို့ ပဲပြောကြအုံးမယ် ဖြတ်ညှပ်ကပ်တယ်လို့ 
Pearl Shwe Sin on April 4, 2012 at 7:59 AM
နောင်ဆိုရင် ကမ္ဘာမှာ မြန်မာဆိုတဲ့ တိုင်းရင်းသား ၀တ်စုံတောင်ပျောက်ရင်ဒုက္ခနော်
Anonymous on April 20, 2012 at 3:25 PM
အေးလေ ၀တ်စရာမရှိရင် ဒုက္ခပါပဲ မြန်မာဝတ်စုံလေးတော့ ထိန်းသိမ်းကြပါရှင်တို့ရယ်
Anonymous on April 21, 2012 at 2:37 PM
Anonymous on April 23, 2012 at 10:52 AM
Anonymous on April 24, 2012 at 5:39 AM
တကယ်ကို သောက်ကျက်သရေ မရှိတဲ့ ဟာမ နှစ်ကောင်ပါ...စင်ကာပူ ဟာတုန်းက လဲ တော်တော် ဆိုးဆိုး ပါပဲ....သူ့ တို တကိုယ် ပဲ မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမ တော့ ဘူးလား.....တကယ်လို့ လုပ်စားချင်တယ် ဆိုရင် လည်းကိုယ့်ကိုကိုယ် မြန်မာလို့ မပြောပါနဲ့....မသင်ဇာဝင့်ကျော်...ခင်ဗျားသတင်းတွေ က မြန်မာ တင် မဟုတ်ဘူး...နောက်ဆို ကမ္ဘာ မိန်းကလေး မြင်ရင်....သူနဲ့ တူတူအိပ်ချင်တယ်..ရမလားဆိုပြီး အမေးခံရမှာပါ.....နည်းနည်းဆင်ခြင်ပေးဖို့ ပြောချင်ပါတယ်
!d!ot$ on May 3, 2012 at 1:31 PM
ဆောက်ရှက်မရှိတဲ့..ဆောက်ကောင်မတွေ..ဒီဆိုဒ်တွေဆို..xxxတောင်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးး သန လို့လေ
chitkung007 on May 14, 2012 at 12:33 PM
Anonymous on May 16, 2012 at 2:04 PM
So good ladies
pt on May 17, 2012 at 2:47 AM
သူ့ အသားအရေ ကိုကည့်ခြင်အားဖြင့် ခန့်မှန်းရရင်....ညိုရင်ညို မညိုရင်မဲလိမ့်မယ် မမြင်ရတဲ့နေရာက
www.naymyaw.blogspot.com on May 21, 2012 at 10:12 AM
အဲဒါခေတ်မီတာကွ သူများနိုင်ငံကကြည့်ပြီး sexy girls တွေမြန်မာမှာမရှိဘူးလို့အပြောခံရမှာဆိုးလို့ တင်ထားတာထင်တယ်။နော်နှစ်ဆိုအကုန်ပဲနေမှာ အားပေးနေမြဲပါ
Anonymous on May 25, 2012 at 5:22 AM
အဲဒီတောင်ကြားထဲ ရထားမောင်းသွင်းလိုက်ရလို့ကတော့ ဟင်းဟင်း
kyaw swar on June 2, 2012 at 4:44 AM
ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ တင်ထားတာက ပိုကြည့်လို့ကောင်းမယ်ထင်တယ်
nandalayan on June 9, 2012 at 5:53 PM
နင်တို့နှစ်ယောက် ဖားကန့်လာပြီး အနှိပ်ခန်းထောင်ရင် ရုပ်ရှင်ရိုက်တာထက်ဝင်ငွေကောင်းမှာ
Anonymous on August 5, 2012 at 8:09 AM
ဟိ ဟိ သာဓုပါတော် သာဓုပါ ........... တစ်ကိုယ်လုံး ချွတ်ထားရင် သုံးခါပြည့်အောင် သာဓုခေါ်ပါ့မယ်..... ဟီး ဟီး တုတ်ချင်စရာကြီး
Anonymous on August 26, 2012 at 6:09 PM
စောက်ရမ်းမိုက်တယ် အ၀တ်စားမ၀တ်ဘဲနဲ့တင်ပါလား ပိုကြည်လို့ကောင်းတာပေါ့
Anonymous on September 21, 2012 at 3:24 PM
Anonymous on January 19, 2013 at 2:33 AM
နှစ်ယောက်စလုံးကို ဖင်ချွတ်ပြီး စောက်ဖုတ်ကို လီး၂ ချောင်းစီလောက်ထည့်ပြီး လိုးမယ်.... စောက်နို့တွေကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ အကြိုက်ညစ်မယ် ကော့ပြန်လန်ထွက်လာမှ စောက်ဖုတ်ကို အသားနီလန်လာအောင် ...လိုးမယ် စောက်ဖာသည်မလို့ ဆဲပြီးတော့ ...
Anonymous on January 25, 2013 at 7:30 AM
လီးပဲ ...လိုးချင်လိုက်တာ ..
moe shine on February 3, 2013 at 11:20 AM
Aung Moe Zaw on March 3, 2013 at 11:01 AM
Anonymous on April 3, 2013 at 7:49 PM
kbh on June 1, 2013 at 2:01 PM
ကြေးစားမ တွေ တော်တော်အလိုးခံချင် နေပုံပဲ နာမည်ကြီးချင် ရင် blue sex video တာရိုက်လိုက်ပါတော့
Anonymous on October 7, 2013 at 10:13 PM
ဘီလူးseptemberr at 4:38AMသူများကိုမပြောနဲ့မင်းတို့ညီမတွေကိုဘဲဂရုစိုက်ကြ
Anonymous on October 8, 2013 at 3:41 AM